Fizahantany: Miverina ireo sambobe mitondra mpizahatany
mercredi, 17 janvier 2018 15:20
Manomboka miverina ireo sambobe mpitondra mpizahatany mitety an’izao tontolo izao taorian’ny volana vitsy nampirongatra ny valanaretina pesta teto Madagasikara. Sambo roa no hifandimby ho avy eto manomboka rahampitso dia ilay sambo be alemana Aida Aura sy ilay italiana Costa.
Hiantsona ao Hell-Ville Nosy Be rahampitso alakamisy 18 janoary 2018 amin'ny fito ora maraina ilay sambo Aida Aura izay hitondra mpizahatany miisa 1223. Hiazo an’Antsiranana ny 19 janoary. Narosony ny diany noho ny rivodoza mitatao amin’ny nosy Maorisy sy La Réunion. Hikasa hitety faritra 52 eto Madagasikara io sambo io mandritra ity taona 2018 ity.
Sambany ity sambo alemana Aida Aura ity no ho avy eto Madagasikara. Nisy omaly ny fivoriana notarihin’ny Préfet de Police niantsoana ireo sampandraharaha mikarakara ny sehatra ny fizahantany eto Nosy Be handaminana ny filaminana sy fahadiovana mba hialana amin'ny fahazarana andavanandro. Hisy koa ny lamina manokana hatao ao amin'ny seranan’i Nosy Be Hell-Ville mandritra ny fandraisana ity sambo lehibe ity.
Hielanelana herinandro eo ny fahatongavan’ny Aida Aura sy Costa aty Madagasikara. Amin’ny 27 janoary no hiantsona ao Nosy-Be dia ao Antsiranana ny ampitson’io, 28 janoary.
Foana avokoa ny fiantsonana in’enina nandrandraina ho an’i Toamasina tamin’ity taona 2017-2018 ity noho ny pesta, nanampy trotraka koa ny rivodoza AVA izay nanimba ny ankamaroan’ireo foto-drafitrasa ara-pizahantany ao Toamasina. Nefa mpizahatany 600 eo farafahakeliny no midina isaky ny misy sambo tonga ao Toamasina, ary mandany eo amin’ny 80 euros eo isan’olona. Ny taom-pizahantany 2018-2019 no andraindrain’ny mpandraharaha ara-pizahantany ao an-toerana.
Sambava : Soavoanio se remet de ses plaies et dévoile ses ambitions
Sambava: Lany tamingana ny zana-trondro noho ny fampiasana ny harato ramikaoko »